London gaa Amsterdam Site na Eurostar Train Site na € 40 | Save A Train
Home > Train Travel Holland > London gaa Amsterdam Site na Eurostar Train Site na € 40
Oge Ọgụgụ: 7 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 14/05/2020)
Otu n'ime ndị kasị ewu ewu na ụzọ gasị na njem na Europe bụ site na London na Amsterdam, a ngwa ngwa njem na n'elu 4 nde njem na-eme ka ndị njem kwa afọ. Otu nhọrọ kacha mma maka njem bụ ụgbọ oloko site na Eurostar, na elu-ọsọ okporo ígwè ejikọta abụọ European n'isi obodo. nke a ụzọ, nke meghere ke 2018, anọgide a ezi nhọrọ maka ndị na-achọ iji zọpụta ego na-enwe mma na okporo ígwè njem na-enye.
n'okpuru ebe, can nwere ike ịchọta nkọwa niile ịchọrọ iji nyere gị aka ijikwa njem London gị na Amsterdam Eurostar.
Isiokwu a na-dere ịkụziri ahịa banyere ụgbọ okporo ígwè njem na e kere site Save A Train, Weebụsaịtị ndị ụgbọ oloko dị ọnụ ala N'ụwa.
Eurostar Train Times Site London Iji Amsterdam
The Eurostar agba mgbe, na ruo 16 ọpụpụ kwa ụbọchị dabere na ezumike na ngwụsị izu. Traingbọ okporo ígwè mbụ sitere na London gaa Amsterdam n’ụbọchị ọ bụla na-apụ London St. Pancras na 07:16 na-ewe a ngụkọta nke 3 awa na 55 nkeji, bịarutere n'ime Amsterdam Central na 12:11 (Amsterdam Centraal bụ Dutch aha Amsterdam Central Station). Nke a bụ mgbe otu n'ime ndị dị ọnụ ala tiketi dị, ma ọ bụrụ na ị na-egbughị oge n'ịza nēbili n'isi i nwere ike zọpụta ụfọdụ ego na gaba na ezumike nke chi ọbụbọ.
Nsoro ugboro ihe fọrọ nke nta mgbe hour, nke epupụta ị ọtụtụ nhọrọ maka ọpụpụ ugboro. The ụgbọ okporo ígwè ikpeazụ nke abalị napu apu na 17:16 na-abịarute na 22:11, nke bụ nanị oge zuru enwe a abalị nri na Dutch isi obodo. Ịlele anyị na saịtị nke i nwere ike ịhụ a button nri nke ihuenyo ma ọ bụ dị nnọọ pịa SaveATrain.com, maka London zuru ezu rue Amsterdam Eurostar.
London ka Brussels Train ahịa
Geneva na London Train ahịa
London ka Amsterdam Train ahịa
Ntinye akwụkwọ gị tiketi On The Eurostar
Tiketi ụgbọ oloko Eurostar gụnyere opekata mpe abụọ ibu na a aka akpa. Ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị na nnọọ ọtụtụ nke ibu, ị nwekwara ike na-ahọrọ a tiketi na-enye gị ohere iji mee ka ihe ihe. Mgbe mmefu ego ụgbọ elu nwere ike ikwu na ihe mbụ ha ntinye akwụkwọ, bag ụgwọ na oche nhọrọ ebubo ngwa ngwa tinye, nke pụtara na ị ejedebe na-akwụ ụgwọ ndị ọzọ n'ihi na a dum ọtụtụ obere.
Ọnụ ahịa tiketi maka London a na Amsterdam Eurostar na-agbadakarị, n'ihi ya, anyị nwere ike ikwu ịzụ tiketi ka anya dị ka ị na-enwe ike. -ekwu, ndị a tiketi na-aga na-ere ọnwa atọ tupu, ezie na oge i nwere ike ịhụ ha ruo ọnwa isii tupu gị ụbọchị nke njem. Anyị na-akwado na iji Save A Train ụwa gbaa ụgbọ okporo ígwè website ịhụ na akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè, nke na-akpaghị aka na-enyocha ihe niile dị atọ ndị yiri nkata na ị na-price price omume, na-ekwe nkwa.
Nye ọnụahịa na ụdị tiketi na London gaa Amsterdam Site Eurostar Train
The Eurostar ụgbọ okporo ígwè na-arụ ọrụ atọ na klas cabins dabere na gị ego. N'ihi na ndị na nanị na-achọ na site n'otu ebe gaa ebe ọzọ, abụọ na klas tiketi bụ gị mma nhọrọ. Ndị na-azụ ahịa njem nwere ike kama na-ahọrọ Standard Premier ma ọ bụ Business Premier tiketi, ma nke ekwe ka ị na-anọdụ ala na mbụ na klas na-azụ na-enye nri n'oge njem gị.
Dị ka anyị na-na na kwuru n'ihu, ịnye ọnụahịa dịgasị dị ka njem gị ụbọchị, ị ga - achọ itinye akwụkwọ ụgbọ oloko gị ozugbo enwere oghere mepere. If you book far enough in advance, ị ga-achọ na-akwụ banyere 92 Dollar njem okirikiri, ma ọ bụ banyere 46 Dollar otu ụzọ. Ichere ruo mgbe ikpeazụ nkeji nwere ike ụgbọala ahịa igwe na-elu, na-akwụ ụgwọ ihe fọrọ nke nta na ibawanye gasịrị ị zụrụ gị tiketi.
Buru n'uche na site May gaa n'ihu, kpọmkwem ụgbọ okporo ígwè si Amsterdam Central Station na London St. Pancras ga-amalite ọrụ, nke ga-azọpụta gị ọtụtụ awa nke njem oge gị laghachi njem. Ọzọkwa na-amalite bụ kpọmkwem ọrụ Rotterdam. Ọrụ ndị a ga-dị ọnụ ala karịa ugbu a ịnye ọnụahịa.
2 boro ebo na otu aka akpa gụnyere
3 boro ebo na otu aka akpa gụnyere
Free cancellations na-akparaghị ókè mgbanwe ruo 60 ụbọchị mgbe ọpụpụ na niile ụzọ gasị n'etiti UK, France na Belgium.
Ọ bụ uru arịba ama na Eurostar bụghị dị ka ndị na-jide a okporo ígwè ngafe, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka a na njem na-adọrọ na oké ọnụ, ịzụta ụgbọ oloko gị tiketi tupu. Ị nwere ike ịchọta ụgbọ oloko tiketi online na dị iche iche weebụsaịtị, agbanyeghị na ebe nrụọrụ weebụ ndị ahụ na-egosi ọnụego ọnụego nke tiketi ụgbọ oloko Eurostar ma e jiri ya tụnyere Zọpụta A Train website.
Ozugbo na isi obodo, i nwere ike jikọọ gaa n'ihu via a ọnụ ọgụgụ nke dị iche iche Amsterdam ụgbọ oloko. A na-enyekwa ọtụtụ ọrụ ụgbọ oloko n'ọtụtụ mba na kọntinent ahụ.
Bremen ka Amsterdam Train ahịa
Ghachite ọnụ ahịa Amsterdam Train
Bielefeld ka ọnụ ahịa ụgbọ oloko Amsterdam
Hamburg ka Amsterdam Train ahịa
On a ụgbọ oloko Eurostar Site na London ruo Amsterdamn
ozugbo onboard, ngụkọta oge njem nke si London gaa Amsterdam n'ụgbọ okporo ígwè dị ihe dị ka 3 awa na 52 nkeji. Jikọtara na gị tupu ọpụpụ mbata, gị ngụkọta njem oge ga-abụ na 4.5 awa.
Ka kpọtụrụ aha na mbụ, e nwere free WiFi onboard, otú i nwere ike na-na niile gị email na-elekọta mmadụ media mkpa. Dabere na gị tiketi, ị nwekwara ike isi iri nchịkwa, ebe ị pụrụ ịchọta nri, ọṅụṅụ na snacks. Ọ bụrụ na ị na-nọ ọdụ na a mbụ na klas ụlọ, nri ga-ozugbo na oche gị.
n'elu mbata, e dịghị mkpa na-aga site paspọtụ akara, ezie na mgbe Brexit na mwepụ nke UK si EU ọrụ ndị a nwere ike ịgbanwe. Ike n'aka-elele iwu obodo tupu ị malite na njem gị.
Ọnụ ahịa London na Antwerp Train
London ka Lille Train ahịa
Strasbourg ka London Train ahịa
London ka ahịa Rotterdam Train
N'ezie, ezigbo ajụjụ bụ ya mere kpọmkwem Europe na-kacha mma nwetara site na ụgbọ okporo ígwè njem – ka emechara, a mma-ejikọrọ Afrika bụ mfe traversable ụgbọelu, ụgbọ ala, ma ọ bụ ụgbọ ala. Otú ọ dị, e nwere ihe ole na ole dị ka ihunanya dị ka anụ mma n'èzí gị window na a ụgbọ okporo ígwè, na nke mbụ oge njem e nwere fọrọ nke nta ka ihe ọ bụla ọzọ ga-adaba adaba karịa hopping on board a ụgbọ okporo ígwè dị nnọọ n'ihu ya napu apu. Nke a bụ na miri iche Europe ọdụ ụgbọelu, ebe elu ego-na oge karịrị awa abụọ na ị na-eji oge ndị ọzọ na ego n'ụzọ ọdụ ebe.
Ekwu okwu nke na njem oge, Europe na-ma ama n'ihi na ya elu-ọsọ ụzọ ụgbọ okporo ígwè, nke anya ịkarị ókè ya asọfe motorways. Ụgbọ oloko ofụri Afrika na-adị ngwa mgbe na kpọmkwem, nke pụtara obere oge n'ụzọ na ndị ọzọ oge ịgagharị.
N'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na-enwe abamuru nke na-ọma-dị ka ha na-rụrụ ọtụtụ n'ime obodo center. Ha na-emekarị na-enye multiple ọpụpụ ugboro kwa ụbọchị na ọtụtụ puku ụzọ gasị, nke pụtara na ị ga-mgbe niile nwere otu nhọrọ maka njem.
Frankfurt na London ụgbọ elu ọnụ ahịa
Munich na London Train ahịa
Moutiers na London Train ahịa
Marseilles ka London Train ahịa
Book Tickets with Save A train maka London gị gaa Amsterdam site na Train
Chọọ anyị na saịtị na akwụkwọ tiketi niile nke Europe ji mma ebe, na nsonye Belgium, Italy, Switzerland na UK (tinyere ụgbọ oloko si London gaa Amsterdam na Eurostar). Anyị search engine na-iji zọpụta ego na niile tiketi na-agụnye mba ntinye akwụkwọ ụgwọ. Anyị na-eme ka ọ dị mfe maka gị ịzụta site n'ịnakwere multiple ụzọ akwụ, tinyere kaadị, Giropay, Ezigbo na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ya mere, ihe ọ bụla gị ihe mere njem, ma ị na-eme njem nanị ma ọ bụ na ndị ọzọ na, were minit ole na ole ichota tiketi na Tazid, nke na-enye ndị kasị ala ahịa, na-ekwe nkwa.
Na-achọ ka akwụkwọ? Were 3 nkeji ma na-achọta a tiketi gị London ka Amsterdam ụgbọ okporo ígwè na www.saveatrain.com . Wet ke ụbọchị na oge ị ga-achọ ịga, na anyị ga-enye gị na nke kacha mma price maka njem gị.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị? Pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flondon-amsterdam-direct-train%2F - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)